Wararka codbixinta doorashada Somaliland - BBC News Somali
Wararka codbixinta doorashada Somaliland
Image caption Goobaha codbixinta Somaliland
Weriyaha BBC oo soo maray meelo kala duwan oo magaalada ah, ayaa sheegay in safafku wali ay dheer yihiin.
Sida uu sheegay guddoomiyaha doorashada, waxaa goobaha codbixinta rasmiyan ay u xirmayaan lixda maqribnimo, balse intii safka ku jirtaa loo ogolaan doono in ay codkooda dhiibtaan waqtigii ay ku qaadatay. meelaha aan nalka lahayn ayuu sheegay in la geeyay tariigyo iyo faynuusyo.
Inta badan doorashado si wanaagsan ayay u socotaa marka laba reebo did u dhacyo aad u yar yar oo dadka qaar ay ku wareereen xarafka uu magacoodu ka bilowdo awgeed meelaha ay ka codayn lahaayeen.
U soo bixidda doorashada ee dhiibashada codka, ayaa lagu tilmaamay in ay ka badan tahay doorashadii tan ka horaysay ee ka dhacday Somaliland.
Guddoomiyaha guddiga doorashada, Ciise Yuusuf Maxamed, ayaa sheegay in xayiraadda laga qaadayo goor dhow socodka gaadiid oo horay loo xayiray ilaa lixda maqribnimo, gaadiid gaar ah oo fasax haysta maahee.
Guddoomiyaha guddiga doorashada Somaliland, ayaa sidoo kale u qiray weriyaha BBC Axmed Siciid Cige in doorashadu aysan ka dhicin ilaa 34 goobood oo gobolka Sool iyo degmada Buuhoodle, ayna soo celiyeen santuuqyadii sida Xuddun oo kale oo laga soo celiyay ilaa 21 santuuqyadii codbixinta ah kadib markii la arkay in shaqaaqo ay ka dhacayso, ilaa shan santuuq jidgooyo loo galay gaari ay saarnaayeen, oo uu guddoomiyuhu sheegay in koox la yiraahdo SSC oo gobolkaas ka dagaalanta ay qaateen, ciidamada Somaliland-na ay ka dabatageen oo ku hareersan yihiin, sida uu sheegay. Wuxuu kaloo guddoomiyuhu xusay in halka la yiraahdo Kala-bayr uu ku dhintay 1 qof.
Guddoomiyuhu, wuxuu sheegay in gobolka Sool iyo degmada Buuhoodle ilaa 213 goobood, marka laga reebo 34 aanay ka dhacaynin doorashada ay inta kale si nabadgalyo ah uga dhacday doorashada.
Gobolka Sanaag, ayuu sheegay guddoomiyuhu in ilaa 255 goobood oo codbixineed ay u socoto codbixinta si caadi ah.
Guud ahaan, Somaliland waxaa laga codaynayaa ilaa 1783 goobood.